Izikweletu Zenhlangano kanye Nezimo Zakho Zenkampani
Ukuze uthuthukise isikweletu sebhizinisi, inkampani yakho izobuyekezwa kusuka kuma-engeli amaningana, konke kudlala indima ebaluleke kakhulu ekusunguleni isikweletu sebhizinisi. Manje njengoba sesixoxile ngama-ejensi wokubika izikweletu ebhizinisini, okufanele ukwenze ukuze wenze iphrofayili yakho yezikweletu ehlanganisiwe nokuthi uzotholwa kanjani, ake sixoxe nenkampani yakho. Ngokuqondile, lelo yibhizinisi lakho '
I-Akhawunti Yakho Yebhange Lebhizinisi Nentuthuko Yezikweletu Ezezimali
Kanye lapho uhlela ibhizinisi lakho, iminyaka ye-akhawunti yakho yasebhange ibaluleke kakhulu. Abaxhasi bazokucabanga ukuthi uqale ngokwenza ibhizinisi lapho uvula i-akhawunti yokubheka ibhizinisi. Ngokuya ngesikweletu sebhizinisi, lolo usuku lokuzalwa kwebhizinisi lakho. Uma ubudlelwane buba isikhathi eside nesikhungo sakho sezezimali zebhizinisi, kungcono kakhulu ngezinhloso zokwakha isikweletu sebhizinisi. Uma unobudlelwano besikhathi eside nebhange lakho lebhizinisi, ungashintshi amabhange.
Engxenyeni yokuqala yenqubo yokulungiswa kwesikweletu sebhizinisi, kufanele ngabe usuqinisekisile ukuthi amadokhumenti e-akhawunti yakho yasebhange afana nalawo ma-IRS, isimo sakho sokufakwa kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlaka zikahulumeni - kubalulekile ukuthi igama lebhizinisi lakho lifane ncamashi kwirekhodi ngalinye .
Ukugoqa Izimpahla Zebhizinisi Zezimali
Uma ibhizinisi lakho linempahla, unokufinyelela kalula enkulumeni nakwikweletu. Amanye amafa angaqashwa noma athengiswe ngqo ngenzuzo yokusebenza. Ngokuthola impahla ephethwe yibhizinisi lakho, unamathuba amaningi okuxhaswa ngezimali, futhi neminyango evulekile yamatemu amahle futhi ungasebenza nabangaki. Ungabuka ezinye izinketho zezimali ezisekelwa yimpahla ngamafa webhizinisi.
Imali Yebhizinisi Nokuhlolwa Kwemali Okuhlobene
Vele, ibhizinisi lakho lidinga ukuthi libe nemali efakazelwe futhi libonise amandla okuphatha isikweletu. Ukukhokha ngesikhathi kwezezimali kwebhizinisi kusekelwa imali engenayo yebhizinisi. Ababolekisi kuzodingeka babone ukuthi ibhizinisi lakho linemali eyanele ukukhokha izikweletu zakho nemigomo.
Isilinganiso Sakho Sebhange nokuthi Sithinta Kanjani Isikweletu sebhizinisi
Lapho wakhetha isikweletu sebhizinisi, ufuna ukuba okungenani isilinganiso esilinganiselwe okungenani se- $ 10,000 sezinyanga zokugcina ze-3 ku-akhawunti yakho yokuhlola ibhizinisi eyinhloko. Ababolekisi bazobuyekeza izilinganiso zakho zasebhange bese belungisa lokho ngekhono elibikezelwe lokulawula isikweletu. Isikali silula kakhulu unesilinganiso se-"Low, Medium, High" senombolo yamadijithi ku-akhawunti yakho yasebhange evamile. Ngakho-ke uma une- $ 1,000, isilinganiso sakho sithi "i-4 ephansi", ngokuba semkhawulweni ophansi wesibalo samadijithi we-4. Ukube unama- $ 9,000, uzoba nesilinganiso se- “4” ephezulu. Ukuze ufaneleke ukuthola imali eningi yebhizinisi, ufuna okungenani ube nesilinganiso se-"5" esiphansi. Lokhu kusho ukuthi unesilinganiso esilinganiselwe esiphakathi ngezinsuku zokugcina ze-90 ze- $ 10,000. Lokhu kubalulekile ukwakha isikweletu sebhizinisi futhi imali akudingeki ukuthi ichithwe, kufanele kube lapho izinyanga ze-3 ukuze ibe nesilinganiso se "5" esiphansi ebhange lakho.
Umshuwalense kanye Nezidingo Zesifiso Somuntu Onekhono
Amabhange amaningi azodinga ukubona izinhlobo eziningi zomshuwalense. Noma unazo zonke izidingo ezingenhla, kusekhona into enkulu edingekayo kwimalimboleko yebhizinisi. Uma ibhizinisi lakho linemali engenayo, izimpahla nesilinganiso sebhange esiqinile, lokho kuyisiqalo esihle sokufakazela ukuthi ungaphatha izindleko ezilindelekile. Kunezindleko ezingalindelekile amabhange nababolekisi abazi ukuthi zibaluleke kakhulu kunezikweletu zebhizinisi. Impilo yakho ngokwesibonelo, lokhu kuzodingeka ukuthi kube nomshuwalense ngaphambi kokuthola imali mboleko yebhizinisi ebhange. Umshuwalense wakho wezimoto uzobukezwa futhi, kanye nomshuwalense wesibopho sebhizinisi, ngoba wonke adlala indima ebalulekile esithombeni sesikweletu sebhizinisi. Ababolekisi bakho bazofuna ukubona wonke umshwalense wakho futhi baqiniseke ukuthi izehlakalo ezingalindelekile zimbozwa ngaphambi kokunikwa isikweletu sebhizinisi lakho.